Ukumaketha - Mag Incredible
Ukumaketha Ku-inthanethi - Yiziphi Izinzuzo Zakho Ezihlukile?
Emhlabeni wamanje, i-inthanethi ithathwa njengendlela efaneleke kakhulu eyenza ukwazi ukuthola amarandi amahle ku-inthanethi. Ibhizinisi lokumaketha ku-inthanethi linikezwa ithuba elibanzi cishe wonke umuntu ukuthi athole imali futhi ngaleyo ndlela, andise iholo lakhe. Nje…
Ungalenza Kanjani Ilogo Ukubamba Izithameli Zakho?
Ukudala amalogo adonsa amehlo kungaba inselele. Kunesizathu esenza izinkampani ezinkulu zikhokhe izigidi ngedizayini yelogo evelele! Ama-logo adonsa amehlo abaluleke kakhulu emhlabeni wanamuhla omangalisayo. Kuthiwa umuntu ojwayelekile ubona isikhangiso njalo ngemizuzwana emi-5, futhi...
I-imeyili Marketing 2.0
Njengomnikazi webhizinisi elincane, wenza konke ongakwenza ukuze uthole imiphumela emihle yokumaketha ngesabelomali esincane nokunakwa komuntu ngamunye. Ukumaketha nge-imeyili kungenye yezindlela ezingabizi kakhulu nezilula kakhulu zokuxhumana namakhasimende akho, uwanikeze ulwazi mayelana nokuthengisa okuzayo,…
Konke Odinga Ukukwazi Mayelana Nokuhumusha Ngomshini
Ibhizinisi emhlabeni wonke likhula ngesivinini esikhulu, futhi lokhu kusho isidingo sokuhumusha umthamo okhulayo wolwazi. Yingakho izinkampani zibheka izindlela zokuhumusha okuqukethwe okwengeziwe ngaphandle kokubangela izindleko, nokuhumusha okungcono kakhulu...
Ukubaluleka Kokumaketha Kwedijithali Emsebenzini Wakho
Inombolo yabasebenzisi be-inthanethi emhlabeni wonke iyanda nsuku zonke. Ngokombiko wakamuva ngalokhu, nguWe Are Social and Hootsuite, ngenkathi ngonyaka ka-2018 bekunabasebenzisi be-inthanethi abayizigidi ezingama-4,021 (ama-53% wabantu bomhlaba), ngoJuni owedlule isibalo safinyelela ezigidini ezingama-4,388…
Ukulungiselela Amakhasi Akho Okufika ku-SEO
by USandra M
Usuvele wazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukwenza iwebhusayithi yakho ibe nezinjini zokusesha. Kodwa ingabe ubusebenzisa izimiso ezifanayo emakhasini akho okufika? Uma kungenjalo, ungase ulahlekelwe yithrafikhi ebalulekile nokuguqulwa. Amakhasi akho okufikela angavela...
Ungawasebenzisa Kanjani Amathuluzi Okuzenzakalelayo Okumaketha Okuyisisekelo
Izinkundla zokumaketha ezizenzakalelayo ziyisibusiso sangempela kunoma yimuphi umkhangisi. Bavumela izinkampani ukuthi zenze imisebenzi nezinqubo zazo ezivamile, ngaphandle kokuncipha kwamakhasimende noma ukwehla kwenani lezimpahla namasevisi. Noma kunjalo, abanye abathengisi abazi ukuthi bangasebenzisa kanjani amandla aphelele wamathuluzi ezishintshayo zokumaketha.…